In the Tall Grass (2019) | MM Movie Store
ရှငျးလငျးနတေဲ့လမျးမကွီးအလယျမှာကာလျတို့ကားလေးရယျဘေးတဈဖကျမှာဘုရားကြောငျးတဈရယျရှိတယျ။ကနျြတဲ့ဘေးတဈခကျြမှာတော့ မြှျောမဆုံးအောငျထူထပျနတေဲ့မွကျရိုငျးရှညျတှရှေိပါတယျ။အဲ့ဒီမွကျရိုငျးရှညျတှကွေားကနေ ကလေးတဈယောကျအကူအညီတောငျးသံကွားလိုကျရတယျ။
‘ကြှနျတေျာ့ကိုကယျကွပါဦး.ကြှနျတျောဒီမှာလမျးပြောကျနလေို့ပါ’…..ဘကျကီရယျ ကာလျရယျစိုးရိမျပူပနျမှုတှနေဲ့အတူ မွကျရိုငျးတောထဲကကလေးကိုကယျဆယျဖို့မွကျရိုငျးပငျရှညျတှကွေားထဲကိုတိုးဝငျသှားခဲ့ပါတယျ။ဘကျကီနဲ့ကာလျတို့ကူညီဖို့လိုကျရှာနတေဲ့ကလေးက တကယျပဲအကူအညီလိုနတောလား??
ရှင်းလင်းနေတဲ့လမ်းမကြီးအလယ်မှာကာလ်တို့ကားလေးရယ်ဘေးတစ်ဖက်မှာဘုရားကျောင်းတစ်ရယ်ရှိတယ်။ကျန်တဲ့ဘေးတစ်ချက်မှာတော့ မျှော်မဆုံးအောင်ထူထပ်နေတဲ့မြက်ရိုင်းရှည်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမြက်ရိုင်းရှည်တွေကြားကနေ ကလေးတစ်ယောက်အကူအညီတောင်းသံကြားလိုက်ရတယ်။
‘ကျွန်တော့်ကိုကယ်ကြပါဦး.ကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းပျောက်နေလို့ပါ’…..ဘက်ကီရယ် ကာလ်ရယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့အတူ မြက်ရိုင်းတောထဲကကလေးကိုကယ်ဆယ်ဖို့မြက်ရိုင်းပင်ရှည်တွေကြားထဲကိုတိုးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘက်ကီနဲ့ကာလ်တို့ကူညီဖို့လိုက်ရှာနေတဲ့ကလေးက တကယ်ပဲအကူအညီလိုနေတာလား??